Nepalistudio » लगातार किन गइरहेछ बारम्बार भुइँचालो? के काठमाडौं फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो जान सक्ने जोखिममा छ? लगातार किन गइरहेछ बारम्बार भुइँचालो? के काठमाडौं फेरि अर्को ठूलो भुइँचालो जान सक्ने जोखिममा छ? – Nepalistudio
११ बैशाख २०७६, बुधबार प्रकाशित